भोलि असार २० गते शुक्रवार , तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल ! - Bigul News
असार १९, २०७६ Bigul TV
भोलि बिक्रम संवत २०७६ साल असार महिनाको २० गते शुक्रवार तद अनुसार सन् २०१९ जुलाई ५ तारिख, तपाईको दिन कस्तो रहला हेर्नुहोस भोलिको राशिफल !
ठुलाबडा तथा आफन्तजनको साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ। धनसम्बन्धी क्रियाकलाप सफलतापुर्वक सम्पन्न भएर जानेछ। मानसिक अस्थिरताका साथै स्वास्थ्यमा समस्या देखिने छ। बिद्यार्थी वर्गका लागि समय मध्यम रहेको छ।
अधुरा रहेका कार्यहरु सरलतापुर्वक सम्पन्न भएर जानेछ। बोलीको नकारात्मक प्रभाव पर्ने सक्ने भएकाले बाणी तथा व्यवहारमा संयमितता अपनाउनु पर्नेछ। मनमा हर्ष उल्लासको मात्रा बढेर जानेछ। साहित्य लेखनको क्षेत्रमा रुचि बढ्ने छ। साथी भाईका साथमा घुम्न जाने अवसर मिल्नेछ। उत्तम भोजनको अवसर मिल्नेछ।
नयाँ कार्यको शुभारभ गर्ने शुभ समय रहेको छैन। टाढाको यात्रा हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आर्थिक कारोवारको क्षेत्रमा समय खासै उपयुक्त रहेक छैन। कार्यमा सफलता पाउनका लागि कडा मेहनत गर्नु पर्नेछ। पारिवारिक वातावरण सुक्ल्ह्मय रहेको छ।
स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्ने भएकाले खानपानमा बिशेष ध्यान दिनु पर्नेछ। शारीरिक रुपमा स्वस्थताको अनुभूति हुनेछ। परिवारका साथमा समय व्यतित हुनेछ। आर्थिक लाभको योग रहेको छ। दाम्पत्यजीवनमा सुमधुरता छाउने छ।
अपेक्षा गरे अनुसार कार्यमा सफलता मिल्नेछ। मानसिक चिन्ताका कारण स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्ला। सरकारी कार्यमा सावधानी अपनाउनु पर्नेछ। बाणी तथा व्यवहारमा संयम रहनु पर्नेछ। यात्रामा सकेसम्म नानिस्कदा नै राम्रो हुनेछ्।
पशु चौपायको क्षेत्रमा सफलता पाउनका लागि अलि बढी परिश्रम र लगानी गर्नु पर्नेछ। शारीरिक तथा मानसिक स्वस्थताका कारण मन उत्साहित रहनेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र अनुकुल रहेको छ। वैवाहिक योगको सम्भावना रहेको छ। रमणीय स्थमा घुम्न जाने अवसर मिल्नेछ। परिवारमा सुखमे वातावरण सिर्जना हुनेछ।
अपेक्षा गरे अनुरुप कार्यमा सफलता मिल्नेछ। सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा मान सम्मानमा वृद्धि भएर जानेछ। कार्यक्षेत्रमा उच्च अधिकारीको साथ र हौशला प्राप्त हुनेछ। आय आर्जनका प्रसस्त श्रोत खुलेर जानेछ। पारिवारिक वातावरण सुखमय रहेको छ। स्वास्थ्य अनुकुल रहेको छ।
कार्यमा सफलता नमिल्नाले समय व्यर्थ खर्च भएर जानेछ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र अनुकुल रहेको छ। सन्तान सुख मिल्ने छैन। स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्ला होसियार रहनु होला। महत्वपूर्ण निर्णय सकेसम्म भोलिको नलिदा नै राम्रो हुनेछ। समग्रमा तपाईका लागि भोलिको दिन मध्यम फलदायी रहेको छ।
रिसलाई काबुमा राख्न सकेको खण्डमा बिशेष लाभ हुने देखिन्छ। मानसिक द्विविधाका कारण कार्यमा खासै प्रगति गर्न सकिने छैन। समयमा भोजन नमिल्नाले स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्नेछ। अनावश्यक झैँ झमेला र वाद विवादमा नाफस्दा नै राम्रो होला। खर्चको मात्रामा वृद्धि भएर जानेछ।
प्रेम तथा मित्रताको बन्धन बाधिने समय रहेको छ। विभिन्न सर सहयोग तथा उपहार पाइने छ। वैवाहिक सुख प्राप्त गर्ने समय रहेको छ। आर्थिक लाभ हुनका साथै मान सम्मानमा वृद्धि भएर जानेछ। स्वास्थ्य अनुकुल रहेको छ। रमणीय स्थानमा यात्रा हुने सम्भावना रहेको छ।
परोपकारको क्षेत्रमा मन आकर्षित हुने छ। मिष्ठान्न भोजनको अवसर मिल्नेछ। कार्यमा सफलता मिल्नेछ। शारीरिक तथा मानसिक स्वस्थताको अनुभूति हुनेछ। पारिवारिक वातावरण सुखमय रहनेछ। इष्टमित्रसंगको भेटघाटले मन रमाउने छ।
भौतिक साधनको क्षतिले धन नाश हुने सम्भावना रहेको छ। सवारी साधन चलाउदा बिशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। साहित्य लेखनको क्षेत्रमा रुचि बढ्ने छ। स्वास्थ्य सामान्य रहेको छ। पढाई लेखाईको क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। बोल्दा विचार पुर्याउनु पर्नेछ।
प्रकाशित : बिहिबार, असार १९, २०७६१९:४५
आज असार २० गते शुक्रवार , तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल !